သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - ကကင်ဆာရဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်လော atypia မပါဘဲ atypia နှင့်အတူ Alopecia သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - ကုသမှု
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - အန္တရာယ်ကရောဂါကြောင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကုသအဖြစ်?
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia တစ် mucosal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်မှာမီးယပ်ကုလားထိုင်များတွင်စစ်ဆေးခြင်းကာလအတွင်းဖော်ထုတ်နိုင်သည့်၎င်း၏မျက်နှာပြင် protuberances ပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရောဂါအန္တရာယ်ကင်ဆာသို့ယိုယွင်းမြင့်မားအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - ကကင်ဆာရဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်လော
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားထိုကဲ့သို့သောရောဂါဆရာဝန်တစ်ဦးကိုမြင်လျှင်, အမျိုးသမီးများအစဉ်အမြဲအဘယ်အရာကို leukoplakia စိတ်ကူးမရကြဘူး။ ရောဂါ၏အမည်များ၏ဇာစ်မြစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဟူသောဝေါဟာရကိုဘာသာပြန်ဆိုဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး "အဖြူပြား" - "leukoplakia" ဟူသောဂရိကနေဘာသာပြန်ထားသော။ ထိုသို့သောဖွဲ့စည်းပုံသားအိမ်ခေါင်း၏ mucosal မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကမျက်နှာပြင် epithelium ၏ thickened, တစ်သျှူးမျက်နှာပြင်အထက်မြင့်တက်လာ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝခြင်းအားဖြင့်, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia တစ်ကင်ဆာဖွဲ့စည်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအချက်ကိုပေးထားသောဆရာဝန်များကင်ဆာရောဂါသယ်ဆောင်ကြပါဘူး။ သို့သော်ကင်ဆာအတွက်တိုးတက်မှုများ၏အန္တရာယ်ရှိနေပြီ။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ပညာရေးဟာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတူးမြောင်းအတွင်း fixed နိုင်ပါသည်။ စာရင်းများအရ leukoplakia အားလုံးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာမူမမှန်များ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5% ဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia မကြာခဏမျိုးဆက်ပွားအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုပေမယ့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်မိန်းကလေးငယ်များရှိပါတယ်။ : mucosal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်, ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏နှောင့်အယှက်, leukoplakia ၏အောက်ပါအမျိုးအစားများ၏ဒီဂရီပေါ် မူတည်.
atypia မပါဘဲသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia
မကြာခဏရောဂါဤပုံစံတစ်ခုနောက်ခံဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - အချို့သောကိစ္စများတွင်ဆရာဝန်များကအခြားဝေါဟာရကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာဘာလဲ - လူနာမကြာခဏကိုသိမထားဘူး။ ဒါဟာရောဂါရသောအခါတွေ့ရှိသည့်သားအိမ်ခေါင်းချွဲအမြှေးပါးမျက်နှာပြင် actin, အ epithelial အလွှာတစ် thickened အပေါ်စစ်တမ်းကြုံတွေ့နေရသည်။ အထူးအင်္ဂါရပ် Basal နှင့် parabasal အလွှာများ၏ဆဲလ်အပြောင်းအလဲများခံယူကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ atypia နှင့်အတူ Leukoplakia
atypical ပုံစံ - သင်က၎င်း၏အမျိုးအစားအချို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက "သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia" ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘဲလျက်။ အဆိုပါချွဲအဖြူရောင်ကြီးထွားလာခြင်းသည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအချင်းချင်းအပေါ် stratify မှစတင်သောအခါဤကဲ့သို့သောပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းမျက်နှာပြင်၏ရလဒ်အဖြစ်မညီမညာဖြစ်နေသောဖြစ်လာသည်နှင့် leukoplakia ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါ mucosa အထက်မြင့်တက်။ ပုံမှန်မီးယပ်ကုလားထိုင်ကနေကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများမြင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအဏုနမူနာသည့်အခါအနာရောဂါစွဲတစ်ရှူးဆရာဝန်များ mutated mucosal ဆဲလ် detect ။ သူတို့ကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံပိုကြီးဖြစ်ကြသည်။ ကုထုံး၏မရှိခြင်းအတွက်ဆဲလ်တွေခွဲဝေခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားအခန်းထဲကခံစားခဲ့ရသညျ။ အဖြူရောင် plaque တဖြည်းဖြည်းသက်ဆိုင်ရာလက်တွေ့ရုပ်ပုံဖြစ်စေတဲ့၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဖဲ့လည်ပင်း၏တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ကိုဖုံးလွှမ်း။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia များ၏စိုးရိမ်ရေမှတ်?
တစ်ဦးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ကြောင်းကိုထိုမိန်းမသည်, ထိုရောဂါ၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များ, ဆရာဝန်တွေသို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ခွဲခြား ကင်ဆာ ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဆိုးရွားစွာသားအိမ်အများစု၏လုပျငနျးကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ - မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောရောဂါများနှင့်အတူအမျိုးသမီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, မျိုးဆက်ပွားပုံမမှန်ကုသပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ထွင်ထားတဲအတွက်ရောင်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစရာတွေဖြစ်သည့်ရောဂါကူးစက်ဝင်ရောက်၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိ၏။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - အကြောင်းရင်းများ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia အဘယ်သို့ပုံစံများ, ရောဂါ၏အကြောင်းတရားများထဲကတွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေဆရာဝန်များပိုင်းတွင် endogenous အချက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားပါ။ အဆိုပါဟော်မုန်းနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်နှောင့်အယှက်မကြာခဏ hypothalamus, pituitary gland နှင့်မျိုးဆက်ပွားစနစ်၏အကြားကိုချိုးဖောက် functional relationship အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ အဆိုပါရလဒ်အတွက်လိင်အင်္ဂါကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွက် hyperplastic ဖြစ်စဉ်များ၏ပစ်လွှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပွငျဆရာဝန်များ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည်မကြာခဏသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ကူးစက်ရောဂါနှင့်ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်များ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုး:
လူ့ papilloma virus ကို ။
လည်ပင်း၏ချွဲအမြှေးပါးများစိတ်ထိခိုက်တွေ့ရှိရပါသည်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Leukoplakia နှင့်မြှင့်တင်ရန်:
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ၏လက္ခဏာများ
အလွယ်တကူရောဂါခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့်တိကျသောရောဂါလက္ခဏာတွေ, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia လက္ခဏာမကြာခဏပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ရောဂါနောက်တစ်နေ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်းစဉ်အတွင်းဆရာဝန်တစ်ဦးတို့ကရောဂါ။ သာအနည်းငယ်ကိစ္စများတွင်, leukoplakia ညွှန်ပြစေခြင်းငှါလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်:
တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကူးစက်အေးဂျင့်လာရောက်ပူးပေါင်းသည့်အခါ symptomatology ပေါ်လာသော:
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - ဘာလုပ်သနည်း
ပြီးတာနဲ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ကုသမှုချက်ချင်းစတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကင်ဆာသို့ယိုယွင်း၏မြင့်အန္တရာယ်ပေးသော, ဆေးသမားရောဂါဗေဒ၏ပထမသံသယမှာအကူအညီကိုရှာရန်အကြံပြုပါသည်။ အစပိုင်းတွင်မဆိုလျှင်, ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆရာဝန်များကတိုက်ရိုက်ကုသမှုနှင့်အခြားခလုတ်အချက်များ။ အဆိုပါ mucosal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှငျ့ ပတျသကျ. ဆရာဝန်များကသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့နဲ့နောက်ထပ်ပြန့်ပွားကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဖယ်ရှားရေးသုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်:
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ၏ရေဒီယိုလှိုင်းဖယ်ရှားရေး
radiowave ကုထုံးအားဖြင့်ဿုံကု သ. Alopecia သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ။ အဆိုပါ technique ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထူးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ် Non-အဆက်အသွယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆရာဝန်ကသားအိမ်ခေါင်းတူးမြောင်းထဲကိုထည့်ခြင်းနှင့်ဘေးဒဏ်သင့်တစ်ရှူး process လုပ်တယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့အရည်၏အပူရောဂါဗေဒဆဲလ်တွေအငွေ့ပျံခြင်းနှင့်သူတို့ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဤနည်းလမ်းကိုအများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်:
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - လေဆာရောင်ခြည်ကုသမှု
တိကျသောအမှု၌သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာဆရာဝန်များမကြာခဏလေဆာရောင်ခြည်ကုသမှုနည်းလမ်းကိုအဖြစ်ရွေးချယ်ထားကြသည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတွက် contactlessly ထွက်ယူသွားတတ်၏ ရာသီစက်ဝန်း၏အဆင့် နှင့် pre-မေ့ဆေးမလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါဆရာဝန်ကလေဆာရောင်ခြည်၏ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့အထူး device ကိုပေးပို့သည်။ ဒါဟာလုံးဝ zapaivaya သွေးကြောပျက်စီးသော mucosa ရောဂါဗေဒဆဲလ်တွေ၏မျက်နှာပြင်ကနေအငွေ့ပျံ။ ဒါကသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ၏ဘယ်လို cauterization ဖြစ်ပါတယ်။
ဖယ်ထုတ်ထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီးသွေးထွက်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေ။ ရောဂါကူးစက်မှု၏ထိုးဖောက်မှုကိုတားဆီးပေးသောဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်မှာ။ အဆိုပါနည်းလမ်းများ၏အားသာချက်များပါဝင်သည်:
ခွဲစိတ်ခန်းသုံး site ကိုမှာအမာရွတ်တစ်သျှူးများမရှိခြင်း,
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
ဒီရောဂါကုသမှု၏လူကြိုက်များနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. မရသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ဖြစ်ပါတယ်။ Douching, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ tampons ၏နိဒါန်းအဘယ်သူမျှမအကျိုးကျေးဇူးနှင့်ရောဂါဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဆဲလ်များဖွဲ့စည်းခြင်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေ။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများ dysplasia ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှုံ့ဆျော, ပုံမှန်မဟုတ်သောဆဲလ်များပြန့်ပွားစေတာဟာနှင့် decoctions တစ်ရှူးများတွင်ဇီဝြဖစ်ထိခိုက်စေ, ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သက်သေပြခဲ့ကြသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia - စစ်ဆင်ရေး
ယင်းကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း, ကြီးမားတဲ့တွေ့ရှိရပါသည်၏ရှေ့မှောက်တွင်ခွဲစိတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ leukoplakia နှင့်အတူသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကန်တော့ချွန်ခန္ခွဲစိတ်ကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဝှမ်းအနာရောဂါစွဲတစ်ရှူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖယ်ရှားရေးပါဝငျသညျ။ စစ်ဆင်ရေး၏ဤအရပ်မှနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. - ရလဒ်အဖြစ်ဆရာဝန်တစ်ဦးကန်တော့ချွန်ကဲ့သို့အ shaped တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ကျယ်ပြန့်တွေ့ရှိရပါသည်ခန္ဓာကိုယ်မှာကောက်ယူထိုသို့သောဖယ်ရှားရေးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ leukoplakia ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောဆဲလ်၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်သားအိမ်၏အစိတ်အပိုင်းဖယ်ရှားခြင်းမှရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Hemostatic မြက်သားအိမ်သွေးထွက် - ကိုအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
သားအိမ် apoplexy - လက္ခဏာများ
သူဘာ luteinizing ဟော်မုန်းများအတွက်တာဝန်ရှိပါသလဲ
Ovary ပင်ပန်းနွမ်းနယ် syndrome ရောဂါ - ကုသရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
Fibrous ရင်သားကင်ဆာရောဂါ - ကုသမှု
သားအိမ်သွေးထွက် - လက္ခဏာများ
Feng Shui များအတွက်မိုးလုံလေလုံအပင်
မူဆယ် d'Art et d'histoire
ပါကင်ဆန်ရောဂါ - အကြောင်းရင်းများ
ဆောင်းတွင်းအဘို့အ beets နှင့်အတူဂေါ်ဖီထုပ်
ကောင်းသောကံကျန်ရစ်ကြသူ 15 ဦးနာမည်ကြီးတွေ
ဟင်းနုနွယ်ရွက် - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
မုန္လာဥနီဖျော်ရည် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ပယင်း Heard ဂျော်နီ Depp အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှထည့်ထားနိုင်ပါတယ်